Duqeymo kama dhicin Soomaaliya shan asbuuc, balse AFRICOM ayaa sheegaysa in la dagaalanka Al-Shabaab uu socdo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDuqeymo kama dhicin Soomaaliya shan asbuuc, balse AFRICOM ayaa sheegaysa in la dagaalanka Al-Shabaab uu socdo
May 16, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Ciidamada Mareykanka. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaan wax duqeyn ah ka geysan gudaha Soomaaliya shantii asbuuc ee u dambeeyay.
Balse afhayeenka AFRICOM kornayl Chris Karns ayaa sheegay in xilli roobaadyada ay isbadalaan howlaha maleeshiyada Al-Shabaab.
“Mar walba dadaaladu waa ay jiraan, maahan se markasta fursado lagu qaado duqeymo. Dhab ahaantii ma jirto wax la joojiyay.” Ayuu yiri.
Weerarkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ayaa dhacay 10-kii April, xilligaas oo ku beegnayd markii uu bilaabmay xilli roobaadka Gu’ga.
Intii lagu guda jiray sanadkan, Mareykanka ayaa gudaha Soomaaliya ka fuliyay ku dhawaad 40 duqeymood oo ka dhan ahaa maleeshiyada Al-Shabaab, oo laga dilay tobanaan dagaalyahan.
Inkastoo duqeymuhu ay socdaan, Al-Shabaab ayaa weli awooda in ay weeraro waa-weyn ay ka fuliso gudaha Soomaaliya iyo wadamada deriska sida Kenya, halkaas oo ay bishii Janaayo ku dishay saddex Mareykan ah kadib weerar ka dhan ahaa saldhig ciidan.
October 30, 2018 Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ku tilmaamay “riyo maalmeed” shirkii madaxda maamul goboleedyada ee ka dhacay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada SSF ayaa afar gaari oo nooca booliiska ku qaadaan maxaabiista ku wareejisay dowlada Puntland. Munaasabad lagu qabtay xarunta madaxtooyada maanta oo Sabti ah ayaa Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland ka guddoomay gawaarida [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaarada howlaha guud ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay maanta oo Talaado ah in ay qorshaynayso in dib loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida ugu dhaqsaha badan. Wasiirka howlaha guud ee dowlada federaalka [...]